Jorodhani Feise Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Jorodhani Feise
Jordan Feise ndiye Anofuridzira Kushambadzira maneja pa Traackr, chinzvimbo chekutungamira chinosimudzira. Jorodhani ane shungu dzekuvaka hukama neanofunga matsva uye shanduko vamiririri munzvimbo yekutengesa. Inzwa wakasununguka ku tweet @jfeiseee neese ako anopisa anokurudzira hukama mibvunzo.
Maitiro Ekuve Nayo Dhijitari Shanduko ine Influencer Hukama
China, January 26, 2017 Muvhuro, Ndira 18, 2021 Jorodhani Feise
Vatengi vako vari kuve vanoziva zvakanyanya, vakapiwa simba, vanoda, vanoona, uye vanonetsa. Iwo matekiniki uye metric eakare haisisiri kuenderana nemaitiro anoita vanhu zvisarudzo munyika yanhasi yedhijitari uye yakabatana. Nekushandisa tekinoroji vatengesi vanokwanisa kuita zvine mutsindo nzira iyo mabrands anoona rwendo rwevatengi. Muchokwadi, 34% yedhijitari shanduko inotungamirwa neCMOs zvichienzaniswa neiyo chete 19% iri kutungamirwa neCTOs neCIOs. Kune vatengesi, ino shanduko inouya se